Home Wararka Gaas “Doorasho Hal qof iyo Hal cod ah waxa ay ka dhici...
Gaas “Doorasho Hal qof iyo Hal cod ah waxa ay ka dhici kartaa keliya Puntland”
Madaxweynaha Puntladn Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta furay Shir weynaha Hanaanka Dimuquraadiyadda, Maamul Wanaagga iyo Horumarinta ka qayb galka Bulshada ee go’aamada dowladda Puntland.
Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiiro iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada Masuuliyiin ka socotay hay’adaha aan dowliga ahayn, 6 degmo iyo 54 degaan oo kamida degmooyinka iyo degaanada Puntland, aqoon yahano, hay’addaha Wasaaradda Dastuurka kala shaqaynayey mashruuca, masuuliyiin ka socda ururada siyaasadda iyo masuuliyiin kale.
“Dimuquraadiyaddu laba siyaaboodba waa u muhiim midda koowaad waxa weeye, kow qofku xorma aha illaa inta uu isagu codkiisa cid ku dooranayo, labo dimuquraadiyaddu Maxay tahay, waa inta tirada badan ra’yigooda in la raaco, halkaa kuma’eka dadka iyagu tirada yar ee codkooda wax ku waayey waa qayb in xuquuqdooda la difaaco oo aanay ku tuman inta tira badnida codka ku heshay”. Ayuu yiri Madaxweyna Puntland.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa si faahfahsan u gorfeeyey qaybaha kala duwan ee adduunka loogu dhaqmo dimuquraaddiyadda, isagoona is barbar dhigay dimuquraadiyadda keliteliska iyo dimuquraadiyadda tala wadaagga ku dhisan, madaxweyanaha yaa hoosta ka xariiqay inaanay dimuquraadiyaddu keenin horumar deg deg ah.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa tilmaamay in Soomaaliya meesha keliya ay ee doorasho hal qof iyo hal cod ahi ay ka dhici karto tahay Puntland, Waxaana uu u sababeeyey Madaxweynuhu in Puntland ay nabad tahay, isla markaana ugu baaqay cid walba oo danaynaysa in Soomaaliya ka dhacdo doorashadaasi ay yimaadaan Puntland si ay tusaale fiican iyo bilaw wanaagsan u qaataan.
Previous articleXassan Shiikh oo la Kulmay Xildhibaanadda Iyo Wasiirada Ku Heeybta ah,Maxaa kasoo baxay!!!
Next articleMW Farmaajo oo ka qeyb galaya shir Madaxeedka Urur Goboleedka IGAD (SAWIRRO)
Al Shabaab Oo Weerar Culus Ku Qaaday Deegaano Hoostaga Gobolka Sh/hoose